CALREC ၏ BRIO သည် SCETV တွင်ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » CALREC'S BRIO SCETV ကို AT အတန်းထိပ် IS
ကိုလံဘီယာ, SC, ဇန်နဝါရီ 31, 2019 - တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားပညာရေးဆိုင်ရာရုပ်မြင်သံကြား (SCETV) နဲ့သူ့ရဲ့အသစ်စက်စက် 45-ခြေလျင်ထုတ်လုပ်မှုထရပ်ကားထပ်တိုးနေသည် Calrec အသံ'' s ကိုက၎င်း၏အသစ်သေးငယ်တဲ့ uplink ထရပ်ကားထဲမှာ Brio36 ၏ installation အောက်ပါ Brio12 ။
အဆိုပါ Brio ယူနစ်တစ်ခုချင်းစီကိုထရပ်ကားရဲ့အသံအပြောင်းအလဲနဲ့စနစ်၏နှလုံးဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါပိုကြီးထုတ်လုပ်မှုထရပ်ကားပိုမိုစုံလင်တဲ့လူသိများတဲ့ full-service ကိုစနစ်များနှင့်မီဒီယာနည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ကုမ္ပဏီက outfitted နှင့်စီမံကိန်းများကိုတစ်အကွာအဝေးများအတွက် Calrec တစ်ဦးကောင်းမွန်စွာထူထောင်ပေါင်းစည်းမှုပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။
"Hydra2 ကွန်ယက်နှင့် Dante interfaces နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူ consoles စ input ကိုနှင့် output ကိုရွေးချယ်စရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်နှင့်အတူလွယ်ကူစွာချဲ့ခြင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နေကြတယ်" ဟုဗင်ျယာမိ Wilson က, အင်ဂျင်နီယာစီမံကိန်းမန်နေဂျာ, တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားပညာရေးဆိုင်ရာရုပ်မြင်သံကြားကပြောပါတယ်။ "ဒီ Dante interface ကိုအလွန်အစုဖို့ကုန်တင်ကားများမှ cabling လိုအပ်ချက်ရိုးရှင်းစွာ။ ကျနော်တို့ကိုလည်းရိုက်ကူးပိုပြီးအရင်းအမြစ်တွေကိုသို့မဟုတ်တစ်ဦးထက်ပိုအော်ပရေတာတစ်ခုလိုအပ်တောင်းဆိုလျှင် uplink ထရပ်ကားနှင့် 12-ခြေလျင်ထုတ်လုပ်မှုယူနစ်များအကြား Brio36 နှင့် Brio45 consoles စလင့်ထားသည်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်လည်းအမျိုးမျိုးသောနေရာများမှရောနှော minuses များအတွက် Automix function ကိုစမ်းသပ်နေကြတယ်။ "
နှစ်ဦးစလုံးထရပ်ကားဟာ Brio12 တိုက်ရိုက်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ console ကို၎င်း၏တိုးချဲ့ slot နှစ်ခုထဲကတစ်ခုအသုံးချဖို့နှင့်အတူ MADI interconnectivity ကိုအသုံးပြုပါ။ ထုတ်လုပ်မှုထရပ်ကားရဲ့ Brio36 interfaces အလှည့်လမ်းကြောင်းများအတွက် uplink ထရပ်ကားမှ MADI သုံးပြီးသောမြက်ချိုင့် TDM router ကိုအတူ MADI မှတဆင့်။ analog I / O နှစ်ဦးစလုံးကုန်တင်ကားများ၏ဘက်မှာပြင်ပ I / O ပြားများအတွက်အသုံးပြုသည်။
"အမျိုးမျိုးသော A1s အဆိုပါ consoles စနှင့် routing ကိုသုံးပါနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောဖြစ်ကြောင်း commented ကြပါပြီ," Wilson ကထပ်ပြောသည်။ "သူတို့ကအချက်ပြမှုများကိုကြားဖြတ်မရှိဘဲယင်ကောင်အပေါ်န်းကျင် channel များကိုရွှေ့နှင့်တစ်ဦးချင်းစီရုပ်သံလိုင်းချွတ်ဘို့ဒိုင်းနမစ်နှင့် EQ ၏အပြည့်အဝထားရှိခြင်းတန်ဖိုးထားနိုင်မှကြိုက်တယ်။ ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့ Calrec ကို ရွေးချယ်. အဘယ်ကြောင့်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ဦးက၎င်း၏ consoles စဒီတော့စက်မှုလုပ်ငန်းအများအပြားအလွတ်တန်း A1s အကြားလူသိများကြသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသော console ကိုရှေးခယျြစရာမြားနှငျ့ ပတျသကျ. အများအပြား A1s နှင့်ထိပ်ရွေးချယ်မှုအဖြစ်အများဆုံးစာရင်း Calrec နှင့်တိုင်ပင်။ "
SCETV 11 ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရှစ်ရေဒီယို station နဲ့အစိုးရပိုင် PBS အဖွဲ့ဝင်ဘူတာရုံဖြစ်ပါတယ်။ SCETV တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားကျောင်းများနှင့်ပြည်နယ်အေဂျင်စီများမှအရင်းအမြစ်များကြွယ်ဝခင်းကျင်းပေးသည်နှင့်နေထိုင်သူများမှ State-ကျယ်ပြန့်ကအရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း, အများပြည်သူဖြစ်ရပ်များ၏လွှမ်းခြုံနှင့်အတူတပြင်လုံးကိုပြည်နယ်အမှုဆောင်နေသည်။
"ဒီ Brio36 နှင့် Brio12 ဆိုအရွယ်အစားထုတ်လွှင့်ဘဏ်ဍာခြင်းဖြင့်လိုအပ်သည့်အင်္ဂါရပ်အားလုံးနှင့်အတူတင်ဆောင်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း consoles စနေကြတယ်" ဟုဟယ်လင် Carr က, Calrec များအတွက်ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာကပြောပါတယ်။ "ပိုမိုစုံလင်လာနှင့်အလုပ်လုပ်သောကွောငျ့ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ကျွမ်း၏ချောမွေ့စွာဖြစ်ခဲ့သည်, ငါတို့ consoles စ၏အပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် SCETV ရဲ့တောငျးဆိုခလွယ်ကူသောဖြည့်ဆည်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Calrec ရဲ့က၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် SCETV ကိုကူညီခဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူမှုအတွက်ဂုဏ်သတင်းအဖြစ်အထူးသဖြင့်ပြင်ပတွင်ထုတ်လွှင့်ဈေးကွက်အတွက်ရွေးချယ်မှု၏စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ console ကိုဖြစ်ခြင်း။ "
calrecaudio အားဖြင့် tweets
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-01-31
ယခင်: လန်ဒန်မြို့ရှိ BVE 2019 မှာ Interra စနစ်များ
နောက်တစ်ခု: AVIWEST ​​20 အတွက် 2018 ရာခိုင်နှုန်းကြီးထွားကြေညာ